Lubbuqabeeyyii: Qabeenya biyyattii qormaata keessa jiru
Lubbuqabeeyyii: Qabeenya biyyattii qormaata keessa jiru Featured
Lubbuqabeeyyiin jireenya dhala namaatiif bu'uura
Itoophiyaan biyyoota qabeenya lubbuqabeeyyiitiin (baayoo daayivarsitii) beekaman keessaa ishee tokko ta'uushii ragaaleen ni mul'isu.
Qabeenyi gama kanaan biyyattiin qabdu kun qorattoota Addunyaatiin kan mirkanaa'e yemmuu ta'u, qorataan lammii Ruusiyaa, Raavloov qabeenya lubbuqabeeyyii biyyattii qorachuudhaan Addunyaaf dhiheesseera.
Itoophiyaan biyyoota yeroo jalqabaatiif biqiltootniifi lubbuqabeeyyiiwwan gara garaa heddumminaan itti argaman saddeet keessaa ishee tokko ta'uu kan ragaa bahe Raavloov, haalli qilleensaa mijataan, teessumni lafaafi akaakuun biyyoo gara garaa jiraachuun immoo biyyattiin qabeenya kanaan akka beekamtu taasisuusaati kan eere.
Qabeenyi biyyattiin gama kanaan qabdu akkuma jirutti ta'ee garuu, yeroo ammaa sababoota garaa garaatiin miidhaa guddaaf saaxilamuudhaan hir'achaa jiraachuu Inistitiyuutiin Qabeenya Lubbuqabeeyyii Itoophiyaa marii dhiheenya kana Magaalaa Bishooftuutti taasiserratti ibseera.
Rakkoo qabeenya kanarra gahaa jiru furuuf sochii cimaa taasisaa jiraachuu kan himu inistitiyuutichi, hojiin dhaabbata tokko qofaan hojjatamu garuu rakkoo kana furuun waan hindanda'amneef hirmaannaa qaamota adda addaa gaafataa jira.
Qabeenyi uumamaa biyyattiin qabdu eegameefi kunuunfamee dhaloota egereetiif akka darbuuf inistitiyutichi kutannoodhaan hojjachaa jiraachuu kan eeran daariktarri inistitiyutichaa, Dr Mallasaa Maariyuu, akaakuuwwan lubbuqabeeyyii kuma tokkoo ol ta'aniif eegumsi taasifamaa jiraachuu dubbatu.
Hojiin kunuunsa lubbuqabeenyii inistitiyuticha qofaan adeemsifamuu waan hindandeenyeef qaamonni qabeenya kanarratti gocha seeraan alaa maal nadhibeedhaan raawwatan to'achuurratti hudhaa ta'uus ni eeru.
Lubbuqabeeyyiin jireenya dhala namaa wajjin kallattiidhaan waan walqabataniif kunuunsiifi eegumsisaa dhimma nama hundaa ta'uu akka qabus ni ibsu.
Inistitiyutichi dhamma kanarratti hojii hubannoo uumuu bal'inaan kan hinraawwanne ta'uu kan dubbatan daarektarichi, gara fuula duraatti hawaasni bal'aan lubbuqabeeyyii akka kunuunsuufi eegu gochuuf gadi fageenyaan hojjatama jedhaniiru.
Jijjiiramni haala qilleensaa, sanyiiwwan galtuu (haaraa dhufan) balaawwan namtolcheefi seeraan ala adamfamuu bineensotaafi barbadaa'uu bosonaa sababoota guguddoo qabeenya lubbuqabeeyyii irratti miidhaa geessisaa jiran ta'uus eeraniiru.
Qabeenyi lubbuqabeeyyii bifa itti fufiinsa qabuun akka eegamuuf hawaasa qofaa osoo hintaane dhaabbileenis qindaa'anii hojjachuu akka qaban kan himan immoo Ministeera Naannawaa, Bosonaafi Jjiirama Qilleensaatti dursaa pirojektii qindaa'aa bulchiinsa lafaafi wabii nyaataa Dr. Tasfaayee Hayilee, inistitiyutichi hanga humnasaatti socho'aa jiraatus qofaasaa bu'aan fidu akka jirre dubbatu.
Qabeenya lubbuqabeeyyii kunuunsuufi eeguun akka hojii dhaabbata tokkootti ilaalamuun dogoggora ta'uus eeranii, dhaabbileefi hawaasni bal'aan hojii kanarratti adda durummaadhaan hirmaatan malee furmaanni dhufu kan hinjirre ibsu.
Akka ibsa Dr. Tasfaayeetti; dhaabbilee hedduun hojii walfakkaataafi walitti dhihaatu osoo hojjatanuu garuu qindoomina hinqaban. Dhaabbanni tokko sanyii fooyyessuuf yemmuu hojjatu inni biraa immoo sanyiiwwan buleeyyii eegee tursiisuuf hojjata. Haata'uu malee sanyii fooyyeessuufi buleeyyii tursiisuu bifa walsimateen adeemsisuun hin danda'amne.
Walumaagalatti, lafti lubbuqabeeyyii malee hinmiidhaagdu, lubbuun dhala namaas lubbuqabeenyyii malee turuu hindanda'u. Kanaafuu miidhamuun lubbuqabeeyyii miidhama dhala namaa ta'uun hubatamee wajjummaan irratti hojjechuun daran murteessaadha.
Torban kana/This_Week 43565
Guyyaa mara/All_Days 1468345